Famonoana mpanangom-bokatra Olona 3 nidoboka am-ponja
Tra-tehaka tao amin'ny kaominina Kiangara ny atidoha nikotrika ny famonoana ilay mpanagom-bokatra toa azy, tamin’iny faritra iny herinandro vitsy lasa izay.
Tamin’ny voalohan’ity herinandro ity, dahalo roa hafa no sarona voalohany niaraka tamin’ny basim-borona iray sy bala telo. Izy ireo izay nokaramain’ilay mpanangom-bokatra 1 tapitrisa ariary. Ireo no nanoro ity farany izay mpaniraka hanatanteraka ny asa ratsy. Samy nidoboka am-ponja vonjimaika izy telo ireo, afak’omaly alina. Nandritra ny fanadihadian'ny zandary no niaiken’ilay mpanarama fa vokatry ny fialonana noho ny fifaninanana ara-barotra no nandatsahany ny ainy. Nampahafantatra ny mpitandro filaminana ilay nahavanon-doza fa lasan'io mpifanandrina aminy io daholo ny vokatra, indrindra ny vary amin'iny faritra avaratr'i Bongolava sy andrefan'i Vonizongo iny.
Raha ny loharanom-baovao any an-toerana mantsy efa ifampitadiavana tanteraka ny vary amin’izao vanimpotoanan’ny main-tany izao izay angonina itsinjovana ny varotra amin’ny maitso ahitra. Olona iray hafa ihany koa no nosamborin’ny mpitandro filaminana izay nivory niaraka taminy nandritra ny ora vitsy mialoha ilay asa ratsy. Samy natolotra ny fampanoavana afak’omaly hariva izy efatra ireo fa ilay nikaon-doha niaraka taminy nahazo fahafahana vonjimaika. Notsipihin’ny kaompanian’ny zandariam-pirenena ao Ankazobe fa tafiditra ao anatin’ny ezaka «opération» an’ny Vondrontobim-pileovana Analamanga izao hetsika izao.